Fihetseham-po ara-pihetseham-po - famantarana, soritraretina, fandinihana, dingana, fomba fiadiana, fisorohana
Ny fampihetseham-batana ara-pihetseham-po dia fomba fiarovan'ny fiarovana ara-tsaina izay mitranga rehefa lava loatra ny toetran'ny tsindrona mifandraika amin'ny karazana asa sasany. Ny manam-pahaizana manokana momba ny asa rehetra dia miankina amin'io aretina io.
Fihetseham-po amin'ny psychologie
Ny endriky ny fampidirana am-pihetseham-po (anglisy) dia navoakan'ny mpitsabo sivily G. Freidenberg. Izany dia fitomboana tsikelikely ao anatin'ny toe-javatra mihetsiketsika ara-pihetseham-po, mitarika amin'ny fametrahana ny fahasamihafan'ny fahasamihafana isan-karazany, manoloana ny fanitsakitsahana goavana ny dingana kognitika sy ny aretina psychosomatic. Ireo olona manana fery mampihetsi-po lalina dia tsy miraharaha ny asany ary manahiran-tsaina amin'ny hafa.
Antony mahatonga ny fery mampihetsi-po
Ny fampihenana ny fery ara-pihetseham-po dia mifototra amin'ny fanafoanana ny antony mahatonga ny toe-javatra. Antony mahatonga ny fitsabahana ara-pihetseham-po:
fifandraisana am-piheverana, fifandraisana amin'ny olona samy hafa fiaviana, ny tsirairay dia tokony ho afaka hanamboatra sy tsy hiditra amin'ny ady;
asa izay mitaky andraikitra lehibe (miaramila, dokotera), rehefa voatery mandray fanapahan-kevitra manan-danja amin'ny toe-javatra misimisy kokoa ny mpiasa ary miankina amin'izany ny fiainan'ny hafa;
fifehezan-tena henjana raha mifandray amin'ny dokambarotra ny asa;
rhythm maoderina haingana amin'ny fisiana toe-javatra be loatra.
Ny famantarana ny soritr'aretina amin'ny voalohany dia tsy voavaha amin'ny fisehoan'ny toe-javatra toy ny reraka vokatry ny fihenjanana, mitovy amin'ny neuroses sy ketraka. Famantarana ny fampijaliana ara-pihetseham-po:
fahalemena ankapobeny ao amin'ny vatana;
migraine matetika sy fanindroany;
fahatsapana alahelo tampoka;
Olana amin'ny lanjany (trondro fiterahana na lozisialy);
ny fihenan'ny hery fiarovan-tena sy ny aretina azo avy amin'ny taovam-pisefoana matetika;
olana amin'ny torimaso (aretim-pahoriana na fahantrana);
fanesorana ny adidin'ny asa.
Ny fanesorana ny fandeferana dia manomboka tsy hita isa ary hita ho reraka fotsiny. Misy teoria maromaro manoritsoritra ny dingana arahina fihetseham-po ara-pihetseham-po. Nanoratra momba ny karazana fihetseham-po ara-pihetseham-po ny manam-pahaizana J. Greenberg ao anatin'ny dingana 5:
"Honeymoon" - teboka 1. Manome fahafaham-po ny asany ilay manampahaizana, miatrika ny entana amin'izao fotoana izao, mandresy ny adin-tsaina, saingy mifamahofaho, isaky ny misy ny fihenjanana indray, dia manomboka ny fientanam-po.
"Tsy fisian'ny solika" - Etap 2. Misy olana amin'ny fatoriana. Ny tsy fisian'ny fanentanana sy ny antony manosika, ny famporisihana avy amin'ny fitantanana dia mitarika ho amin'ny eritreritra momba ny tsy fahampian-tsakafo, mihena ny famokarana, ny "tsy mampino". Zava-mahaliana ny tombontsoa amin'ny asa ao amin'io fikambanana io. Raha toa ny fanentanana (ohatra, mamoaka taratasy mari-pankasitrahana), ny mpiasa dia mbola miasa mafy, fa kosa mandoa ny fahasalamana.
"Ireo soritr'aretina miteraka" - ny dingana fahatelo. Ny asa momba ny asa dia mitarika ho amin'ny fieboanana, fahaverezan'ny loharanom-pahanginana. Miaraka amin'ny fahasosorana, ny fahatezerana na ny fahaketrahana ary ny fahatsapana ny fitsangantsanganana sy ny tsy fisian'ny fotoana.
"Crisis" no laharana fahaefatra. Mihamaro ny tsy fahafaham-po amin'ny tenany satria aretina manokana sy psychosomatika no miforona, ny ambany dia ambany, ny toetry ny fahasalamana.
"Manaparitaka ny rindrina" - dingana 5. Mihombo be ny aretina amin'ny fihanaky ny fahatsapana matetika amin'ny loza mitatao amin'ny fiainana (aretin'ny fifindran'ny aretim-pivalanana, ratroka). Fandrahonana asa.
Fihetseham-po ara-pihetseham-po ara-pihetseham-po - tsy misy izany fahaizana manokana izany izay tsy ahitan'io trangan-javatra io, ny asa tiany indraindray dia mahatonga ny tsy firaharahiana, tsy vonona ny hankany izany ary fahatsapana tsy manam-paharoa. Ny fotoana bebe kokoa dia lasa hatramin'ny fanombohan'ny syndrome ary tsy misy ny andraikitra amin'ny toe-javatra iainana sy ny faniriana hanao zavatra momba izany - ny matanjaka kokoa ny fametrahana ny olona sy ny fanoloran-tenany manokana.
Ny sendikan'ny fihetseham-po mampihetsi-po amin'ny mpampianatra dia avy amin'ny fitomboan'ny enta-mavesatra sy ny andraikitra ho an'ny mpianatra tsirairay. Ao amin'ny kilasy tsirairay dia misy ankizy "sarotra", izay mila fanampiana manokana ary tsy manome antoka ny amin'ny fisian'ny fifandonana. Miseho noho ny antony hafa ihany koa ny fampijaliana ny mpampianatra:
ny enta-mavesatra entina isan-karazany;
ny tsy fitoviana eo amin'ny vidin'ny psikolojika sy ny fanonerana ara-materialy;
ireo toe-javatra manelingelina rehefa mifandray amin'ny ray aman-dreny;
fifandirana ao amin'ny ekipa.
Ny fisorohana ny aretim-pangorahana ara-pihetseham-po amin'ny asan'ny mpampianatra:
Mankasitraka ny tenanao ho mpitsabo mahay indrindra ianao;
mba hahafahana mahita ny hasarobidin'ny fifandonana mitranga: ahoana ny momba izany, inona no lanjany hita amin'ny fotoanan'ny fifandonana;
ny fandinihana ny fanjakana.
Fihetseham-po amin'ny dokotera
Ny fampijaliana ara-pihetseham-po amin'ny mpiasan'ny fahasalamana dia mety hampidi-doza ho an'ny marary - mampihena ny fitarainana amin'ny zavatra ataon'izy ireo mandritra ny fitsaboana sy ny fanodikodinam-bola, ny fahatsapana ny fahatsapana ho an'ny marary, ho an'ny olona, ​​fa tsy amin'ny "fitaovana" hitarika ho amin'ny fahamendrehana sy ny fahadisoana, mitarika fahafatesana marary. Ny fanasitranana ara-pihetseham-po amin'ny asa ho an'ny dokotera dia marika mampihetsi-po fa zava-dehibe ny manamarina ny toe-tsainao ary raha misy ny fepetra ahiahiana hanao fihetsika henjana.
Emo-fofona avy amin'ny reny
Ny fanabeazana ilay zaza dia asa goavana ara-panahy sy ara-batana ary andraikitra lehibe. Ny fandroahana ara-pihetseham-po avy amin'ny mama amin'ny fialan-tsasatra dia tranga matetika, mitranga ireto antony ireto:
Ny fiovan'ny zaza "tsy minitra miala sasatra" - tsy misy fotoana tokony hitsaharana;
Ny famerana ny zaza sy ny raharaha an-tokantrano dia mamorona fahatsiarovan-toerana mampidi-doza, "andro iainana" amin'ny fisorohana;
Matetika dia marary sy tsy misy fitsangatsanganana ho an'ny mpitsabo ny ankizy;
tsy fahampian'ny fanohanana sy fanampiana avy amin'ny olona akaiky;
ny faniriana hanao araka izay tratra an-trano, ankoatra ireo izay mifandray manokana amin'ny zaza.
Inona no azo atao:
mba hizara amin'ny hariva ny tranga mifandraika amin'ny fianakaviana amin'ny manan-danja indrindra;
manomboka matory bebe kokoa, miandry ny zavatra;
Hanolotra fotoana 1 - 2 isaky ny herinandro ho an'ny tenanao: fomba fitsaboana cosmetolojia, fanasambe, fitsidihana ny klioban'ny fitondran-tena - mamela ny zaza ho an'ny ray na ray aman-dreny;
araho ny toe-pihetseham-pony ary aza manakivy ny fihetseham-po, ary manomboka maneho azy ireo.
Diagnose sy fisorohana ny famoahana ara-pihetseham-po
Ny fepetra fisorohana sy ny fijerena amin'ny fotoana voafetra amin'ny fiterahana ara-pihetseham-po dia manara-maso ny fahasimbana ara-pihetseham-po mahatsiravina ary manao dingana mba hisorohana na hanamaivanana ny toe-javatra. Ny fandinihan-tena dia azo atao amin'ny fanampiana ireo fanontaniana izay tokony hohamarinina:
Tiako ity asa ity;
Hitako eto aho ao anatin'ny 1,2,3 taona (amin'ny toerana mitovy na ambony);
Inona no ezahiko?
Inona no zava-dehibe amin'ny asako?
Inona no soa ho an'ny asa?
Te-hampivelatra bebe kokoa amin'ity asa ity aho;
Inona no hiova raha handao ity asa ity aho?
Fomba fisorohana ny fampihorohoroana ara-pihetseham-po
Ny fahamarinana malaza fa mora kokoa ny misoroka noho ny fitsaboana, noho izany dia tena manan-danja tokoa ny fisorohana ny fikorontanana ara-pihetseham-po. Raha toa ka tsy afaka mitsidika manam-pahaizana momba ny sikolojia amin'ny ho avy tsy ho ela isika, dia tsy maintsy manomboka amin'ny asan'ny tsirairay isika. Ny fanimbana ara-psikolojika ara-pihetseham-po dia mety hijanona na hijanona amin'ny fotoana, mandinika lalàna tsotra:
Ny fikarakarana ny rafitry ny asa fitsaharana, ny enta-mavesatra dia tokony ampy;
Aza miasa any an-trano, ny zava-drehetra tokony hatao any am-piasana;
Mampihatra im-betsaka isan-kerinandro, fantatra fa ny fampiharana dia mampitombo ny famokarana hormones ny fifaliana sy ny fientanam-po (serotonin, dopamine);
farafahakeliny in-droa isan-taona manova ny toe-javatra, mandeha (afaka hita foana safidy fitsangantsanganana);
Ny torimaso feno dia iray amin'ireo lafiny manan-danja amin'ny vokatra amin'ny asa, ny tsy fahampian'ny torimaso dia mitarika ho amin'ny tsy fahafalian'ny fiainana sy ny fahaverezan'ny faharetana;
Mampihena ny fihinanana kafeinina any am-piasana sy any an-trano, mamoy sigara;
mandray andraikitra irery ihany amin'ny asany, ary tsy miditra amin'ny toeran'ny mpiasa ary manampy ny "sahirana" rehetra - manatanteraka ny sisintany sy ny fahafahana miteny hoe "tsia";
misafidy fialam-boly, fialamboly - fitsaboana tsara ho an'ny atidoha, fanovana ny fahatsapana;
raha toa ka tsy mitondra fahafinaretana ilay asa, manaiky marina izany ary manomboka manao dingana mankany amin'ny asan'ny nofinao.
Fihetseham-po ara-pihetseham-po - ahoana no hiady?
Fihetseham-po ara-pihetseham-po - ahoana no fomba fitsaboana sy fanasitranana azy tanteraka? Zava-dehibe ny manamarika fa io aretina io dia tsy heverina ho aretina, azo lazaina fa ny toe-tsaina psicophysiolojika manamarina ny famantarana ny rafi-pitabatabana nerlandey, ny fanjakana neurose ary ny fahaketrahana amin'izao fotoana izao raha toa ka efa mihodina tanteraka ny hatezerana ara-pihetseham-po (ara-tsaina). Amin'ny fisehoan-javatra voalohany, dia azonao atao ny mampiasa ireto torohevitra manaraka ireto:
ny mamolavola ny fomba fifehezan-tena sy ny fisaintsainana;
Mandinika ny fitsaboana amin'ny fisian'ny aretina miafina sy mandalo izay afaka manova ny toe-piainana ara-psikolojika, mitsiriritra ny tsy firaharahiana sy ny tsy fahampian-tsakafo (ohatra, ny aretin'ny tiroida ao amin'ny tiroida dia miantraika amin'ny toe-tsaina psicophysique);
Mandehana any amin'ny mpitsabo saina iray na manomboka mitsidika vondrona psychoanalytika, izay ahitana ny antsipirihan'ny fanjakana sy ny safidy amin'ny famahana ny olana;
mba hitantanana asa vaovao (mety amin'ny sehatra mifandray).
Fihetseham-po - fitsaboana
Ahoana no iatrehana ny fery ara-pihetseham-po raha toa ka tsy mitombo ny fepetra fisorohana ary tsy mitombo fotsiny ny fahatsapana ny fahabangana? Aza matahotra ny hitsidika mpitsabo aretin-tsaina iray hitaky fanafody ampy. Ny fanaintainan'ny neurotransmitters toy ny dopamine, ny serotonin dia hampitombo ny toe-javatra, ary hampitombo ny soritr'aretin'ny aretina mampihorohoro ara-pihetseham-po. Ny dokotera dia mandefa fitsaboana manokana miaraka amin'ny fanafody:
Ny psykolojia an'ilay niharam-boina
Famaritana ny endriky ny firaisankina Sishora
Tahotra ny fanaovana firaisana
Portable amplifier portable
Geneferon ho an'ny ankizy
Noho ny famaranana toro-hevitra iray tena ilaina amin'ny fisafidianana ny firavaka fanoratana
Ahoana no fomba handraisako lesona amin'ny tanako manokana?
Dresses amin'ny hariva lava 2014
Coat Pompa - 36 sary ny akanjon'ny vehivavy marika avy amin'i Pompa
Fashion 20 taona tamin'ny taonjato faha-20
Mpandrindra ho an'ny orinasa
Ahoana ny fomba hanatsarana ny rambony amin'ny volon'ondry?
Tazo maitso - 40 safidy tianao
Voangom-boankazo mangatsiaka tao amin'ny aerogril
Mamolavola mofo pita